Muuqaal: Istarees, niyad jab, baqdin, PTSD - Youmo
Bildspel: Stress, nedstämdhet, ångest, PTSD - somaliska
Ma dareemaysaa inuu jidhkaagu giigsan yahay oo uu wax badan madaxaagu ka fikiraayo? Miyey kugu adagtahey inaad is dejiso? Miyaad si dhibyar u cadhootaa? Markaas ayaa laga yaabaa inay istarees ku hayso.
Istareeska ayaa jidhkaaga giig ka dhigi kara. Shaqada wadnaha iyo neefsashada ayaa ka degdeg badan.
Istareesku waxa uu imaan karaa markaad wax ka warwarsan tahay, tusaale ahaan imtaxaan dugsiga. Istareesku waxa uu imaan karaa marka aanad ogeyn waxay xaaladu noqon doonto. Istareesku waxa kale oo uu ku xidhnaan karaa adigoo ku jira xaalad ku cabsi gelisa. Cabitaanka sigaarka ayaa kaa dhigi kara mid aad uga sii istarees badan. Waxaad adigu noqon kartaa mid istarees qaba iyadoo aanad garaneyn sababta.
Marmarka qaar ayay wanaagsan tahay inaad istarees qabto, sida marka aad u baahan tahay inaad wax dhakhso u sameyso. Laakiin kadib waxaad u baahan tahay inaad nasato oo aad tamar kale hesho. In istarees wakhti badan lagu jiro ayaa kaa dhigi karta mid niyad jabsan iyadoo aanay taasi jidhka u wanaagsaneyn.
Waxyaalahan ayaad sameyn kartaa haddii istarees aad qabto:
Sidaad dareemayso u sheeg saaxiib ama qof weyn oo aad garaneyso. Waad nafiseysaa markaas kadib.
Isku dey inaad si wanaagsan wax u cunto una seexato.
Dhaqdhaqaaq samee, tusaale ahaan adigoo soo socsoconaaya ama tabobaranaaya/jimicsanaaya.
Samee waxyaalaha aad jeceshay inaad qabato, tusaale ahaan inaad asxaabta u tagto ama aad muusig dhageysato.
Hel hab adiga kugu haboon oo aad iskugu dajinayso. Tusaale ahaan iskudey inaad qaadato tabobarka sida loo neefsado.
Ka fikir waxa kuu keenaaya istareeska. Miyaad adigu wax ka badali kartaa? Qor waxaad xasuusato.
Miyaad sigaarka cabtaa? Isku dey inaad joojiso.
In murugo iyo daal la dareemo
Miyaad dareemaysaa murugo, daal iyo warwar? Miyaa laga yaabaa inaad joojisay wax aad u arki jirtey inay xiiso badan leeyihiin? Waxa taas loo yaqaanaa nedstämd.
Waxa laga yaabaa inaad adigu og tahay sababta aad sidaas u dareemayso. Tusaale ahaan wax xun ayaa dhacay, haddii noloshu is bedeshay ama haddii aad dareemayso cidlo. Waxaad sidoo kale dareemi kartaa niyadjeb iyo werwer iyadoo aanay wax gaar ah kuugu dhicin.
Waxa laga yaabaa inaad dareemayso sida adigoo inay waligaa aad xanuunsaneyso. Laakiin sida badan waa ay kaa tagtaa. Waxaad mar labaadna noqon doontaa qof faraxsan.
Waxyaalahan ayaad sameyn kartaa:
U ogolow inuu dareenku soo baxo, halkaad isku dayi laheyd inaad iska saarto. Waa ok in la ooyo ama la cadhoodo.
Sidaad dareemayso u sheeg saaxiib ama qof weyn oo aad garaneyso. Wax wanaagsan ayaad dareemaysaa markaa kadib.
Isku dey inaad baxdo maalin walba. Iftiinka maalinta ayaa kuu wanaagsan adiga.
Qor sida aad dareemayso.
Miyuu ku hayaa istarees? Ka fikir sababta iyo haddii aad adigu wax badeli karto.
In la niyad jabsanaado
Haddii aad dareentey niyadjab iyo daal wax ka badan hal todobaad ayaad noqon kartaa qof niyadjabsan. Markaas ayaad noqon kartaa qof aad u daalan ama ay kuugu adag tahay inaad seexato. Waxaad adigu noqon kartaa mid ka gaajo badan ama caadi ahaan ka gaajo yar. Waxa kugu adkaan karta inaad wax ahmiyada saarto iyadoo aad is dhibyar u xanaaqdo. Waxyaalaha aad markii hore jeclaan jirtey inaad sameyso ayaad dareemi kartaa in wax lagu caajiso ama bilaa-micne yihiin. Malaha wax badan ayaad fikireysaa. Waxa laga yaabaa inaad bilowdo inaad ka fikirto inaanad awoodi karin inaad noolaato.
Markaas ayaad u baahan tahay caawimo si aad uga roonaato. La xidhiidh ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) ama rugta caafimaadka dhimirka. Waxaad u tagi kartaa skolsköterskan ama skolkuratorn haddii aad dugsiga dhigato.
Miyaad dareemaysaa baqdin badan iyo warwar? Taasi waxay kartaa calaamad walaac. Walaac jidhka ayaa aad looga dareemaa. Waxaad adigu dareemi kartaa culeys laabta kaa saaran. Wadnaha ayaa dhakhso ama xoog u garaacaaya iyadoo la dareemayo inay neeftu kugu adag tahay. Waxaad adigu yeelan kartaa calool xanuun ama dawakhaad. Waxa laga yaabaa inaad dareemayso inaanad caadi aheyn ama inaad ku dhex jirto xumbo.
Waxa laga yaabaa inaad garanayso waxa keenaaya walaaca. Laakiin waxaad sidoo kale yeelan kartaa walaac adigoo aanad garaneyn sababta.
Walaaca kuugu yimaada si kadis ah oo xad-dhaaf ah waxa loo yaqaanaa panikångest.
Waxay noqon kartaa mid baqdin leh in la yeesho walaac. Marmarka qaar ayaad dareemaysaa inaad luminayso kantaroolka. Laakiin walaacu wax khatar ah ma aha. Waa falcelin caadi ah oo jidhku sameeyo. Walaacu markasta wuu taggaa.
Waxyaalahan ayaad sameyn kartaa haddii aad walaac qabto
Isku dey inaad sii waddo waxaad ka fikireysay inaad sameyso xataa haddii aad yeelato walaac. Waxaad arki doontaa in dareenada qalafsan ay yaraan doonaan waxyar ka dib.
Sidaad dareemayso u sheeg saaxiib ama qof weyn oo aad garaneyso.
Miyaad sigaar cabtaa ama buuri cuntaa? Yaree ama isku day inaad joojiso.
Iska ilaali khamrada ama daroogooyinka kale. Waxay ku siin karaan walaac dheeraad ah.
Wax dheeraad ah ka baro walaac, tusaale ahaan adigoo wax ka akhriyaaya ama la hadlaaya qof wax badan ka yaqaana.
In wax xun la dareemo wax weyn markay kugu dhacaan ka dib - PTSD
Miyaad ka fikireysaa wax baqdin leh oo kugu dhacay? Waxa laga yaabaa inay hurdadu kugu adkaato, inaad riyo xun ku riyooto, inaad daalantey oo aad niyad jabsantey, in jidhku ku xanuunaayo, aad cadhaysantey iyo inaad ay kugu adagtey inaad wax ahmiyad siiyo. Malaha waxa laga yaaba inaanad waxbaba ka fikireyn ama aad ka hadleyso waxaad soo martey. Tan ayaa noqon karta calaamad posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.
Laakiin waxaad dareemi kartaa baqdin, xataa haddii uu wakhti badan ka soo wareegay. Waa ay adkaan kartaa laakiin wax lala taabo inay sidaa ahaato.
Dareemada ugu adadag ayaa iska taga muddo ka dib. Laakiin sidoo kale wax badan ayay sii joogi karaan, ama hadhow imaan karaan. Markaa ayaad u baahan tahay caawimo si aad uga dareento amaan oo aad ugu noolaato nolol wanaagsan.
Waxan ayaad sameyn kartaa haddii uu arin weyn oo xun ku soo marey
Sidaad dareemayso u sheeg saaxiib ama qof weyn oo aad garaneyso. Waad nafiseysaa markaa kadib.
Caawimo ka raadso ungdomsmottagning, vårdcentral, bup ama rugta caafimaadka dhimirka. Waxaad u taggi kartaa skolsköterskan ama skolkuratorn haddii aad dugsiga dhigato.
Raadso daryeel haddii aad u xanuunsaneyso
La xidhiidh ungdomsmottagning, vårdcentralen ama barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Waxaad la xidhiidhi kartaa skolsköterskan ama skolkuratorn haddii aad dugsiga dhigato.
Wac 112 ama la xidhiidh psykiatrisk akutmottagning haddii adiga ama qof kale uu aad u xanuunsanaayo oo uu dhakhso caawiimo ugu baahan yahay. Wac telefoonka 1177 si aad u ogaato meesha aad aadayso. Weydiiso qof aad garaneyso inuu ku caawiyo haddii aad u baahan tahay.
MawduucFilim: Cidna aniga iima adkeysan karto